Jessica Chastain na-agwa kpakpando na 'Ọ: Isi nke Abụọ' - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Jessica Chastain na-agwa kpakpando na 'ọ: isi nke abụọ'
Jessica Chastain na-agwa kpakpando na 'ọ: isi nke abụọ'
by Kelly McNeely February 20, 2018 931 echiche
Dị ka a kọrọ iche iche, Onye nnọchi anya Oscar oge abụọ Jessica Chastain nọ na mkparịta ụka iji buru ụzọ na Andy Muschietti's Ọ: Isi nke Abụọ dị ka onye toro eto Beverley Marsh.
Agbanyeghị na n'oge a enweghị ihe edere aha ma ọ bụ tinye na nkume, nke a bụ ọkwa ọkwa izizi (ọkara) maka ụdị ndị okenye nke ọgbakọ Loser. Akwụkwọ akụkọ dị iche iche na-ekwu na "akụkụ abụọ ahụ amalitela ikwurịta okwu banyere [Chastain] na-abịa ọrụ a".
site na Backstage
Ihe nwere ike ime maka ndị okenye toro eto abụrụla okwu na-ekpo ọkụ n'etiti mkparịta ụka dị egwu kemgbe ọganihu nke ọhịa Itnzipu mbu.
Anyị ga kọrọ na mbụ na Chastain nọ na-ele ọrụ ahụ anya na ndị na - akwado ya yiri ka ha na - akwado echiche a - enwere ọtụtụ akwụkwọ mmado na-eme ka ọ dị ka Bev. Tụle eziokwu ahụ bụ na onye omee nwere ọgụgụ isi arụ ọrụ na Muschietti na 2013 Mama - nke Guillermo Del Toro mepụtara - ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ọ ga - abụ onye kachasị elu.
Mama site na Universal Pictures
Muschietti laghachiri iduzi Ọ: Isi nke Abụọ ya na ode akwukwo Gary Dauberman. Mgbe ụdị ihe nkiri nke It mbụ e chepụtara echepụta, akwụkwọ a na-emegharị ka a edemede site David Kajganich. Cary Fukunaga (ezi mata Oge 1, aka nke kacha mma otu oge nke TV, lụso m ọgụ) mechara gosipụta ka ọ dezie ya na Chase Palmer. Mgbe Fukunaga lara ma Muschietti weghaara ọrụ ahụ, a kpọbatara Dauberman iji nyere aka degharịa ederede iji kwado ọhụụ Muschietti ma ọ bụrụ na ihe nkiri ahụ.
Ederede maka Ọ: Isi nke Abụọ ka nọ n'ọrụ ya na eserese eserese ka ịmalite N'oge okpomọkụ a.
site na Indiewire
Ọzọkwa, anyị enweghị ozi ọ bụla a bịanyere aka na ya na nkedo (ọ bụ ezie na ọ dị mma iche na anyị ga-ahụ nloghachi nke Bill Skarsgård dị ka Pennywise). Yabụ, n'oge a, ị ga-enwerịrị obi abụọ na akwụkwọ mmado ọ bụla ị hụrụ n'ihi na ha nwere ike ịme ya.
Dị ka mgbe niile, ruo mgbe enwetara nkọwa, were ihe nnu were ihe niile.
Kpamkpam fan mere
N'ikwu nke a, ka akụkọ ahụ na-abịa, anyị ga-ejide n'aka na ị ga-edebe gị! Ọ: Isi nke Abụọ edoziri maka ịtọhapụ na Septemba 6, 2019.